မြန်မာသံရုံး၊ ကိုလံဘိုမြို့က ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့နှင့် (၇၃) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ခြင်း – Ministry of Foreign Affairs
မြန်မာသံရုံး၊ ကိုလံဘိုမြို့က ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့နှင့် (၇၃) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ခြင်း
(၁၄-၂-၂၀၂၀ ရက်၊ ကိုလံဘိုမြို့)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့နှင့် (၇၃) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဟန်သူ ကြီးမှူး၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်၊ ၁၉၀၀ မှ ၂၁၀၀ နာရီအထိ ကိုလံဘိုမြို့၊ Galle Face Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် အဏ္ဏဝါသယံဇာတဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး Hon. Douglas Devananda က ဂုဏ်ထူးဆောင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အထူးဧည့်သည်တော်များအဖြစ် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Karu Jayasooriya၊ ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် Lieutenant General Shavendra Silva၊ ရေတပ်ဦးစီးချုပ် Vice Admiral Piyal De Silva နှင့် လေတပ်ဦးစီးချုပ် Air Marshal Sumangala Dias တို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုလံဘိုမြို့အခြေစိုက် သံရုံးများမှ သံတမန်များ၊ ကိုလံဘိုစီမံကိန်း၊ မြန်မာ-သီရိလင်္ကာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း၊ သီရိလင်္ကာ ကုန်သည်ကြီးများအသင်းတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သီရိလင်္ကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ စုစုပေါင်း ၂၅၀ ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်သီချင်းများအား ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် သံအမတ်ကြီး ဦးဟန်သူနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဧည့်သည်တော် Hon. Douglas Devananda တို့က မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဧည့်သည်တော်များအား အာရှ၊ ဥရောပအစားအစာများအပြင် မြန်မာအစားအစာများဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားရှုခင်းများ၊ အကများ ပါဝင်သည့် ဗီဒီယိုဖိုင်များပြသခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။